Talo-siinta Shirkada Xoogsatada Kuleylka leh iyo Talooyin ka socda Tamarta Weyn
Home > tamarta la cusboonaysiin karo > Noocyada kuleylka
Mashiinnada kuleylka iyo hawo bixinta hawada ayaa ah tamar dib loo cusbooneysiin karo oo kaa caawin kara inaad badbaadiso tamarta oo aad abuurto kuleyl iyo kulul kulul gurigaaga.
Marka la gooyo tamarta kuleylka ee hawada ama dhulka, bamka kuleylka ayaa loo isticmaali karaa in lagu isticmaalo nidaamyada kuleylka kuleylka iyo kuleyliyaha kuleylka, iyo sidoo kale soo saarida biyo kulul guriga adiga ama ganacsigaaga.
Bambooyin kuleylka ayaa si fiican u shaqeynaya - dhab ahaantii 300% waxtar leh. Tani waxay ka dhigan tahay in qayb kasta oo tamar ah ay isticmaalaan hawlgalka, waxay soo saaraan saddex ama wax ka badan oo kuleyl ah si loogu isticmaalo guriga.
Maxaa badan, Ground iyo Meelaha hawada ee hawada kuleylka leh waxay xaq u leeyihiin Dhiirigelinta Cabbiraadaha Cusub (RHI) ee bixiya lacagaha guryaha ee 7 sano iyo ganacsiyada sanadaha 20.
Energy Energy waxay ku xiran kartaa mashiinno badan oo hawo kulul oo ay ku jiraan Vaillant, Worcester Bosch, Daikin iyo LG. Noocyada kuleylka ayaa sida caadiga ah siinaya kuleylka heerkulka hoose ilaa gaaska caadiga ah ama saliida saliidda, sidaas darteed haddii aad dib u cusbooneysiinayso nidaamka kuleylka ee kuleyliyaha kuleyliyaha, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku darto qaar ka mid ah radiators dheeraad ah ama kordhiya xajmiga radiators ee hadda jira.
Meelaha kuleylka biyaha kuleylka ah tamar kuleylka ka soo baxa godka cirifka, cirifka qotada dheer ama ilaha biyaha sida harada. Biyaha waxay ku wareegayaan dhulka ama ilaha biyaha, soo saarida kuleylka taas oo markaa kor u qaadeysa heerkulka loo baahan yahay by bamka kuleylka. Sida soo saaraha Cornwall, Energy Energy waxay ku talineysaa in la xiro qalabka tamarta kuleylka ee Kensa kaas oo lagu rakibi karo guryaha, ganacsiyada oo loo isticmaalo nidaamyada kuleylka weyn ee degmada. Waxyaabaha kale ayaa loo rakibi karaa macaamiisha leh doorasho kale.
Haddii aad ku nooshahay Devon ama Cornwall oo aad jeclaan lahayd in aad ogaato wax badan oo ku saabsan bambooyinka kuleylka ee hawada ama hawo, ama samee sahan lacag la'aan ah, fadlan buuxi codsiga dib u soo wac foomka dhinaca midigta, ama na soo wac 0800 0 246 234 .
Deeqaha ayaa diyaar u ah bambooyin kuleyliyaha haddii aad qaadato lacagta, fadlan naga soo wac 0800 0 246 234 wixii macluumaad dheeraad ah.
Hel inta ugu badan oo ka soo baxa hawadaada hawada kuleylka ee keydinta Energy Energy Trust
Sidee loo shaqeeyaa mashiinka kuleylka ee dhulka ka shaqeeya - xushmeynaya Bambooyin Kensa Heat Pumps
Fiiro gaar ah sida mashiinka hawada kuleylku ka shaqeeyo Mitsubishi
Sidee buu u shaqeynayaa Pump kuleylka?
Noocyada kuleylka hawada ku shaqeynaya adigoo soo saaraya kuleylka dabiiciga ah ee dabaysha ama dhulka ku xeeran gurigaaga, sii kordhiya heerkulka iyo bamgareynta guriga dhexdiisa si aad u isticmaasho siyaabo dhowr ah oo ay ku jiraan biyo kulul, kuleylka iyo kuleyliyaha.
Waxay yihiin kuwo aad ufiican oo xitaa shaqeyn kara marka heerkulka dibeddu uu u hooseeyo sida -14 ° C
Maxay u dooranaysaa Tamarta Maaliyadeed ee loogu talagalay rakibidda kuleyliyaha?
Kooxdayada qibrada leh waxay awoodi doonaan inay kuu sheegaan in mashiinnada kuleylka ay ku habboon yihiin gurigaaga iyo haddii ay sidaas tahay, xalalku waa kuu habboon yahay
Waxaan kaa caawin doonaa inaad hubiso inaad haysato dhammaan macluumaadka saxda ah ee aad ku dalbaneyso lacagahaaga RHI.